Mon, Oct 21, 2019 at 11:00pm
मंगलवार, १४ जेष्ठ २०७६,	शेरबहादुर तामाङ.	2.13K
नेपाल र चीनबीचको प्रमुख व्यापारिक नाका तातोपानी नाका जेठ १५ गते खुल्ने भएको छ । ०७२ को भूकम्पदेखि बन्द रहेको यो नाका खुल्दा नेपाल–चीन दुवै देशलाई फाईदा पुग्नेछ । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको यो ऐतिहासिक नाका खुल्ने समाचारले जिल्लावासी अत्यन्त हर्षित भएका छन ।
गोप्य रुपमा ती कर्मचारीहरूलाई पनि फाईलको खोजीमा लगाएं । ४ दिनपछि एउटा मन्त्रालयमा कानुन कै कर्मचारीले फेला परेको सूचना प्राप्त भयो । तत्काल मन्त्रीज्युलाई जानकारी गराइयो र वहाँलाई क्याविनेटमा ल्याउन अनुरोध गरें ।
जुरे पहिरो, ०७२ को भुकम्प र भोटेकोसी बाढीले यस नाका हुँदै चल्ने नेपाल चीन व्यापार बन्द भयो । मुलत ०७२ को भुकम्पदेखि यो नाका बन्द भयो ।
यसबीचमा तातोपानी नाका सम्बन्धी धेरै समाचारहरू बने । नाका बन्द भयो, नाका खुल्ने भयो, चीनले तातोपानी नाका सदाकालागी बन्द गर्ने, केरुङ्लाई चीनको प्राथमिकता, चीनले नाकाबन्द गर्ने भएर नै खासाका मानिसलाई न्यालम सार्‍यो, नेपाल सरकारको नाका खोल्न उदासिनता जस्ता समाचारहरू आईरहे । यसबीचमा धेरैले धेरैलाई अपजस दिन भ्याए । धेरैले नाका खोल्ने ठुलठुला भाषण दिन भ्याए । जस लिन भ्याए, अपजस दिन भ्याए ।
वास्तविकता भने अर्कै थियो । यो नाका बन्द गर्ने चीन सरकारको कुनै सोंच नै थिएन । नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा जस्को सरकार भए पनि नाका सुचारु गर्ने नै हो । तर एउटा प्रसंग यहाँ उल्लेख गर्न उचित ठानेँ ।
म २०७४ चैत्र २ गते नेपाल सरकारको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीको रुपमा नियुक्ति भएं । त्यतिबेला नयाँ मन्त्रिमण्डल बनेपछि राजदुतहरू, कुटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूले आफुखुसी मन्त्रीहरू, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई भेटघाट गर्ने चलन रहेछ । यो विषयमा मन्त्रिमण्डलमा छलफल भयो र अबदेखि कुटनीतिक नियोगका प्रमुख वा राजदुतहरूले मन्त्रीहरूसंग भेटघाट गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुमति लिनुपर्ने आचारसंहिता बन्यो ।
नयाँ मन्त्रिमण्डल बनेपछि कुटनीतिक मर्यादा स्वरुप राजदुतहरूसंग परराष्ट्रको अनुमतिमा मेरो पनि भेटघाट शुरु भयो । २०७५ बैशाख २१ गते तत्कालीन चिनियाँ राजदुतसंग भेटघाट कानुन मन्त्रालयमा भयो । दुईपक्षीय हितका बारेमा औपचारिक भलाकुसारी भयो । अन्त्यमा आफू सिन्धुपाल्चोक चीनको बोर्डर जिल्लाको प्रतिनिधि भएको र तातोपानी नाका बारे अन्योलता रहेकोले यसै जिल्लाको प्रतिनिधिको हैसियतले चिनियाँ पक्षको नाकाबारे खासमा आधिकारिक धारण के हो ? भनेर प्रश्न गरें । उहाँले यो नाका नचलाउने हाम्रो कुनै सोंच नभएको, यो नाका खोल्ने भनेर नै चीन तर्फको सबै बाटो मर्मत गरिसकेको, बरु नेपाल तर्फको बाटो नेपालले अझै नबनाएको र बोर्डरमा गर्नुपर्ने आवश्यक तयारी पनि नगरेको गुनासो गर्नुभयो र अझ मितेरी पुल भुकम्पले भत्केको सो पुल नबनाई नाका नखुल्ने भएकोले सो पुल र केरुङ नाकाको दुबै पुल हामीले बनाउन नेपाल सरकारको स्वीकृतिको लागि प्रस्ताव पठाएको तर अझै नेपाल सरकारबट जवाफ नपाएको भनेर भन्नुभयो ।
बोर्डरको पुल भएकोले आधिआधी बनाउनु पर्नेमा सबै चीनले बनाईदिने प्रस्ताव गरेको रहेछ । नेपाल पट्टीको भाग पनि चीनले बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार नेपालको स्वीकृति चाहिने रहेछ । बुझ्दा थाहा लग्यो कि प्रस्ताव पठाएको ९ महिना भईसकेछ । आफैं क्याविनेट मन्त्री भएकोले मलाई थाहा छैन भन्न मिलेन र मैले कुटनीतिक तरिकाले जवाफ दिएं र भनें हामी छिट्टै स्वीकृत गर्छौ र हाम्रो तर्फबाट बोर्डरमा गर्नुपने सबै काम पनि हुन्छ ।
उहाँलाई बिदाई गरेपछि फाईल कहाँ छ भनेर खोजी गर्ने थालें । सम्बन्धि मन्त्रालयहरू परराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार, अर्थ, मन्त्रिपरिषद कार्यालय, वाणिज्य आदिमा खोजी गर्न कतिपय मन्त्रीलाई, कतिपय सचिवलाई चीनले पठाएको पुल बनाउने प्रस्ताव कहाँ छ भनेर खोजी गरियो । धेरैको जवाफ फेला परेन वा थाहा नभएको नै आयो । किनकी फाईल सबै कहाँ हुने कुरा पनि थिएन । हरेक मन्त्रालयमा एकजना कानुन मन्त्रालयका उपसचिव वा सहसचिव स्तरको कर्मचारी रहने ब्यवस्था छ । गोप्य रुपमा ती कर्मचारीहरूलाई पनि फाईलको खोजीमा लगाएं । ४ दिनपछि एउटा मन्त्रालयमा कानुन कै कर्मचारीले फेला परेको सूचना प्राप्त भयो । तत्काल मन्त्रीज्युलाई जानकारी गराइयो र वहाँलाई क्याविनेटमा ल्याउन अनुरोध गरें ।
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण निकट आईरहेकोले त्यसैमा बिषय बनाउन ढिला हुन लागेको थियो । तर सम्बन्धित मन्त्रीको तदारुकता र हाम्रो पनि निरन्तरको प्रयत्नले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव स्वीकृत गर्न सफल भयौं ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीको असार ५, २०७५ मा भएको औपचारिक चीन भ्रमण एजेन्डा बनाउन सफल भयौं । चीन सरकारले तातोपानी र केरुङ्को मितेरी पुल बनाउने भयो ।
त्यसपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराको भदौ २२, २०७५ देखि चीनको स्वशासित प्रदेश तिब्बतको ५ दिने औपचारिक भ्रमणको अवसरमा सभामुख र चीन सरकारको तिब्बत प्रमुखले संयुक्त रुपमा ल्हासाबाट अनलाईन माध्यमबाट दुबै पुलको सिलन्यास भयो । चीनले ९ महिनामै मितेरी पुल निर्माण सम्पन्न गर्‍यो ।
अब यहि जेठ १५ गणतन्त्र दिवसको अवसरमा यो नाका औपचारिक रुपमा खोल्ने कार्यक्रम हुंदैछ । नेपाल तर्फबाट उद्योग वाणिज्यमन्त्री मा. मातृका यादव, मा. अग्नि सापकोटा र म सहित सम्बन्धित सचिवज्युहरु, भन्सार प्रमुख र चीनको तर्फबाट केन्द्रीय मन्त्री, तिब्बत सरकार प्रमुख, राजदुत सहित उच्चपदस्थ अधिकारीहरुको उपस्थितिमा औपचारिक रुपमा नाकाको उद्घाटन हुनेछ ।
यो नाका खोल्न औपचारिक, अनौपचारिक रुपमा पहलकदमी गर्ने नेपाल सरकार, सम्माननीय प्रधानमन्त्री, नेताज्युहरू लगायत सबैलाई हार्दिक धन्यवाद ब्यक्त गर्दछु । मितेरी पुल निर्माण गरेर यो नाका खोल्न सहयोग्स र निर्णय गरेकोमा मित्रराष्ट्र चीनलाई लाखौलाख धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । सिन्धुपाल्चोकबासी जनतालाई हार्दिक बधाई र सम्पुर्ण नेपालको प्रगतिमा यो नाका भएर हुने ब्यापारले सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्दछु । चीनबाट सामान ल्याउनेमात्र होईन नेपालबाट पनि सामान निर्यात गर्ने कुरामा राष्ट्र र ब्यापारीको ध्यान जान सकोस शुभकामना ।